Taawarada Isgaadhsiinta Ee Xaafada Magaalooyinka Somaliland Ka Dhex Taagan Iyo Tilifoonada Gacanta Ee Tirada Beelay Dhibaato Intee Leeg Bay Kuhayaan Bulshada Somaliland”Cilmi Baadhis Rasmiya | Berberatoday.com
Taawarada Isgaadhsiinta Ee Xaafada Magaalooyinka Somaliland Ka Dhex Taagan Iyo Tilifoonada Gacanta Ee Tirada Beelay Dhibaato Intee Leeg Bay Kuhayaan Bulshada Somaliland”Cilmi Baadhis Rasmiya
Hargeysa(Berberatoday.com)- Tirada taleefannada gacanta ayaa si degdeg ah u kordhay. Waxay ka dhigan tahay in dadku ay samaynayaan wicitaano badan oo badan oo u diraya mowjado raadiye dheeraad ah jawiga.
Dhammaanteen waan ognahay in telefoonada gacanta ay la xidhiidhaan munaarad ayadoo la isticmaalayo tamar raadiyeyaasha joogtada ah ama mowjadaha raadiyaha. Waa nooc ka mid ah shucaaca elektromagnetic ah. Caadiyan, shucaac waxaa loo kala saari karaa laba nooc iyadoo ku xiran tamarta:
Raadinta shucaaca sida raajada iyo raajada.
Shucuurta aan lafdhabarka lahayn sida mowjadaha raadiyaha, iftiinka muuqaalka iyo curyaamiinta.
Raajatada kasta waxay leedahay mawjadeeda iyo soo noqnoqosheeda u gaarka ah, taas oo ah tirada wareegyada mawjada oo gudbisa dhibicda halkii labaad. Waxaa lagu qiyaasaa cutubyada loo yaqaan Hertz (Hz).
Inta badan ee shucaaca elektromagnetic-ka ah ayaa go’aamiya tamarta. Caadi ahaan, shucaac ionizing waa qadar sare leh taas oo macnaheedu yahay inay ka kooban tahay tamar sare. Iyo shucaaca aan lafdhabarka lahayn waa mid aad u hooseeya oo sidaas darteed waa tamar hooseeya.
Weligaa ma yaabin sidee ayuu iftiinka qorraxdu u kululaa jidhkaaga? Sidee mashiinka microwave-yadu cuntada u kululeeyaa? Dhammaan sababtoo ah saameynta kuleylka shucaaca.
WAXYAABAHA CAAFIMAADKA EE LAGA HELI KARO RADI-SOMALI
Waa run in jidhka bani’aadamku uu soo nuugo qadar go’an oo shucaac ah ee raadiyaha elektromagnetic-ka ah. Qiyaasta tamarta jirka ee ay nuugeen jirkeena waa la qiyaasi karaa. Waxaa lagu magacaabaa qiyaasta nuugista gaarka ah ama SAR. Waxaa ku jira watts kiilo kasta oo culeyska jirka ah.
Shucaacu waa meel kasta oo nagu wareegsan. Laakiin ma arki karno dhammaan shucladaas. Waxaan arki karnaa kaliya shucaaca muuqaalka muuqaal leh oo leh mawjado u dhaxeeya meel u dhaxaysa 370 – 780 nanometer.
Haddii jirkeena uu ku dhaco shucaac ah sida raajada iyo raajada, waxaa jiri doona halis dheeraad ah ee kansarka. Laakiin telefoonada gacanta waxay isticmaalaan hirarka idaacadaha oo ah shucaaca aan caadiga ahayn.
Markaan ka hadlayno taleefannada gacanta, waxaan ku dhajinaynaa madaxaaga. Hirarka mawjadaha raadiyaha ayaa sidoo kale keeni kara saamayn kuleylka. Hase yeeshee, saamaynta kuleylka waa daqiiqo sidaa daraadeed xitaa xitaa ma dareemaysid iyaga. Xaddiga kuleylku sababay ma ahan mid ku filan oo kufilma heerkulka jirka oo idil.
Daraasado fara badan ayaa la sameeyay si loo helo saameynta caafimaad ee tamarta idaacadda. Hase yeeshe, daraasaddan midkoodna ma leh caddayn cad oo lagu xaqiijinayo xidhiidhka ka dhexeeya raadiyeyaasha iyo kansarka.
Sannadihii ugu danbeeyay, waxaa jiray horumarin dhowr ah oo tiknoolaji taleefanka gacanta ah si loo hubiyo in ay ammaan yihiin. Talefoonada gacanta ayaa maalmahan isticmaala awood yar oo ka yar talefoonada loo isticmaalo maalmo hore.
RADIASKA LAGU HELAY TELEFOONKA TELEFOONKA
Haddii moobalka taleefanka gacanta lagu ogaado inay sababaan kansar, markaa waa la soo celin lahaa. Raadiyaha oo laga bixiyay moobiilka taleefannada gacanta ayaa kun jeer ka hooseeya xadka amniga.
Intaa waxaa dheer, mawjadaha moobiilka taleefanka gacanta waxay ku yaalaan meel ka sarreeya heerarka dhulka. Sidaa awgeed, hirarka raadiyaha waxaa lagu kala qaadaa inta badan kiisaska. Iyana si joogto ah looma gudbin karo waqti kasta. Gudbinta kaliya ayaa dhacaya marka la waco taleefanka. Sidaa darteed, munaaradahan taleefannada gacanta ma aha khataro caafimaad oo xitaa haddii aad ku nooshahay meel u dhow.
DIB U EEGIDDA CILLADA TELEFONKA CELL PHONES
Looma baahna in la yareeyo raadinta idaacadda. Kuwani waa tamar hoose oo aan hagaagsaneyn oo aan waxyeello naga helin. Cilmi-baadhayaashu waxay sii wadaan inay bartaan saameynta fogaanta muddada fog ee heerarka hoose ee tamarta-kulaylka joogtada ah.
Laakin, si aad u noqotid dhinaca nabdoonaanta, waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho telefoonada tayada leh oo leh qadar siyaado ah oo gaar ah (SAR) ama ka hooseeya 1.6 watts kilo. Isticmaal taleefannada gacanta si masuuliyad leh!